Emirates mampiato ny sidina mankany Etazonia: Tsy azo antoka ny seranam-piaramanidina amerikana!
Ny Emirates Airlines monina any Dubai dia nanao dingana feno fahasahiana tamin'ny fanambarana fotsiny ny fanafoanana ny sidina rehetra avy any Dubai mankany Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Miami (MIA), Newark (EWR), Orlando (MCO), San Francisco (SFO) ary Seattle (SEA).
Japan Airlines sy All Nippon Airlines dia nanao fanambarana mitovy amin'ny fanafoanana ny sidina amin'ny fiaramanidina Boeing 777 sy B787 avy any Japana mankany Etazonia.
Ny antony dia ny fandefasana 5G nataon'ny orinasan'ny US Communication.
Ny Federal Aviation Administration dia nilaza ny zoma teo fa ny fitsabahana 5G dia mety hanemotra ny rafitra toy ny fanodikodinam-bola amin'ny Boeing 787 tsy hiditra, ka ny freins ihany no mampiadana ny fiaramanidina.
Izany dia "afaka manakana ny fiaramanidina tsy hijanona eo amin'ny lalamby", hoy ny FAA.
Ny fanafoanana bebe kokoa ny sidina mankany Etazonia dia mety hanaraka ireto zotram-piaramanidina manaraka ireto izay miasa B777 na B787
Seranam-piaramanidina Biman Bangladesh
LOT Poloney Airlines
Royal Air Madagascar
Ao amin'ny fanambarana an-gazety ihany koa navoaka tao amin'ny tranokalan'ny Emirates hoy izy:
Noho ny ahiahy momba ny fampandehanan-draharaha mifandraika amin'ny fandefasana serivisy tambajotra finday 5G any Etazonia any amin'ny seranam-piaramanidina sasany, dia hampiato ny sidina mankany amin'ireto toerana alehany manaraka ireto i Emirates manomboka ny 19 Janoary 2022 mandra-pahatongan'ny fampahafantarana fanampiny:
Ireo mpanjifa mitazona tapakila miaraka amin'ny toerana farany mankany amin'ny iray amin'ireo voalaza etsy ambony dia tsy ekena amin'ny toerana niaviany.
Ny sidina Emirates mankany New York JFK, Los Angeles (LAX) ary Washington DC (IAD) dia mbola mandeha araka ny fandaharam-potoana.
Nilaza i Emirates fa miara-miasa akaiky amin'ireo mpanamboatra fiaramanidina sy ireo manampahefana mifandraika amin'izany izy ireo mba hanamaivanana ny olana momba ny asa ary manantena ny hanohy ny serivisy any Etazonia haingana araka izay azo atao.
Tonga ny hetsika na dia teo aza ny faneken'ny AT&T sy Verizon fa hametra ny serivisy C-band 5G manodidina ny seranam-piaramanidina voafantina taorian'ny fampitandreman'ny zotram-piaramanidina anatiny fa hitarika amin'ny fanafoanana ny sidina mpandeha sy entana izany.
Ny Federal Aviation Administration dia nampitandrina fa ny fiaramanidina Boeing 787 dia mety hiatrika olana momba ny fiarovana izay ametrahana ny serivisy 5G Verizon sy AT&T, izay misy fiantraikany amin'ny fiaramanidina 135 mahery any Etazonia ary 1,010 hafa eran-tany.
Tamin'ny volana lasa teo, nangataka ny sekreteran'ny fitaterana Pete Buttigieg i Boeing sy Airbus mba hanemotra ny fandefasana 5G indray noho ny ahiahy, taorian'ny fahatarana teo aloha tany Verizon sy AT&T niaraka tamin'ny fanitarana 5G. Nahazo fifanarahana mitentina 45.5 miliara dolara sy 23.41 miliara dolara ny goavan'ny fifandraisandavitra, tamin'ny 2021 avy amin'ny Vaomieran'ny Fifandraisana Federaly tamin'ny lavanty hananganana ireo serivisy.
Ny fandefasana 5G midadasika dia mbola napetraka amin'ny alarobia, fa ny orinasa roa dia nanaiky ny talata hamerenana vonjimaika ny serivisiny manodidina ny seranam-piaramanidina sasany taorian'ny fanerena.
United Airlines Nampitandrina tao amin'ny fanambarana iray ny talata teo fa ny fandefasana 5G manodidina ny seranam-piaramanidina dia "tsy hiafara amin'ny fanafoanana sy fanelingelenana sidina an'hetsiny ho an'ny mpanjifa manerana ny indostria amin'ny 2022, fa koa ny fampiatoana ny sidina entana mankany amin'ireo toerana ireo, ka miteraka voka-dratsy ratsy. amin'ny rojo famatsiana efa marefo.”
Tsy hisy fanelingelenana amin'ny sidina ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Palm Beach noho ny fandefasana 5G - ny fifandonana eo amin'ny zotram-piaramanidina sy ny mpitatitra finday lehibe dia miato ary na dia manomboka aza, ny PBIA dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina 50 izay ho voaaro vonjimaika. amin'ny faritra buffer 5G.
Ireto seranam-piaramanidina amerikana manaraka ireto dia nanambara ny fametrahana faritra fitehirizana ary tokony ho azo antoka na dia amin'ny famoahana 5G aza
Seranam-piaramanidina misy 5G Buffer
More on: Boeing | AT & T | Aviation | Japana | Los Angeles | Shina | Boeing 777 | San Francisco | Bangladesy | Houston | Federal Administration Aviation | Airport | Airbus | Boston | Chicago | Miami | Seattle | Federal Communications Commission | Dubai | Tahiti | Beach | Dallas
Tsy dia Rosiana loatra akory: Mandrahona ny hampiato ny Superjet 'Rosiana' ny sazy Airbus|
Olombelona sy ny natiora. Programan'ny Lehilahy sy ny Biosphere an'ny UNESCO Shina|
Ny ITA Airways dia mpandraharaha italiana voalohany an'ny Airbus A350 Airbus, Airport|
Fanafody vaovao ho an'ny vavonin'ny tongotra diabeta Los Angeles|
AirbusAirportAT & TAviationBangladesyBeachBoeingBoeing 777BostonChicagoShinaDallasDubaiFederal Administration AviationFederal Communications CommissionHoustonJapanaLos AngelesMiamiSan FranciscoSeattleTahiti
Previous Ny ankamaroan'ny Amerikanina voakasika dia mankasitraka ny Psychedelics mba hitsaboana ny aretin-tsaina
Manaraka Orinasa 35 nankatoavina ho an'ny programa fitomboka Guam Safe Travels nohavaozina